ISIPILIYONI SIKA SANDILANDS SIMENZE WAYIGUGU – Journalismiziko
Home›Sport›ISIPILIYONI SIKA SANDILANDS SIMENZE WAYIGUGU
Ubevutha engabaselwe unozinti we-Orlando Pirates uWayne Sandilands, emdlalweni we-Absa Premiership ezakhe ebezitholene kuwo neBlack Leopards enkundleni yezemidlalo eThohoyandou, ngempelasonto.
Sekuwumlando ukuthi ezika Magebhula zinqobe lo mdlalo ngegoli elilodwa eqandeni sekuvalwe amehlo, okube umkhonto ogwaze ekhaya kaThabiso Mokoena ngemuva komnyakazo ka Vincent Pule, ngesikhathi sikanompempe.
USandilands, osemnkantshubovu ukhethwe njengomdlali ovelele kulandela ukwenza kahle kwakhe kulo mdlalo. USandilands usebenze kanzima ukuvimba imizamo yabagadli be Lidoda Duvha, okuyikho okuqikelele ukuthi isiwombe sokuqala siphela ingahambi phambili kulamaqembu womabili. Ngesiwombe sokuqala, iLeopards iyona ebihlasela ngamandla, iphinde yaba namathuba amaningi kepha yahluleka ukuwasebenzisa.
Ephawula ngemuva komdlalo uSandilands uthe “Ngibonga labo abaqeqesha onozinti eqenjini ngokusebenza ngokuzikhandla uma sizilolonga. Kuyamangalisa indlela iqembu elidlala ngayo ngokuzimisela. Kumele sizithobe, siqhubeke nokwenza kahle.”
UMqeqeshi we Lidoda Duvha ukhale ngamathuba ezakhe eziwalahlile, egcizelela ukuthi bebedinga okungenani amaphuzu amathathu, okungenani noma elilodwa. “Sizamile njengeqembu, umuntu obephakathi kwethu namaphuzu amathathu uWayne Sandilands,”
“Ukulimala kwabadlali nakho kube ingqinamba ephoqe ukuba kushintshe enkundleni, ebesikuhlelele lo mdlalo.” Kusho u-Alan Clark.
Ezika Clark, zingezinye lamaqembu alengelwa izembe njengoba zilele endaweni yeshumi nane ngamaphuzu angamashumi amabili, ngemuva kwemidlalo eyishumi nanye.
UJosephe Zinnbauer ocija iBhakabhaka uthe, “USandilands ube inhlanhla yethu enkulu esize ukuthi sinqobe lo mdlalo. Sijabule kakhulu ngamaphuzu amathathu, kuyakhombisa ukuthi iqembu lilangazelele impumelelo ngokunqoba imidlalo. Sesibheke umdlalo phakathi kwethu nomkhaya iKaizer Chiefs mhla zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kwephezulu.”
Ukunqoba lo mdlalo kwe Pirates sekuyibeke endaweni yesibili kwi log yesicoco se-Absa Premiership, ngamaphuzu angamashumi amathathu nesishiyagalolunye ngemuva kwemidlalo engamashumi amabili nanye. Izimbangi zayo ezinkulu iKaizer Chiefs isaqhwakele esicongweni se log ngamaphuzu angamashumi amane nanhlanu ngemuva kwemidlalo engamashumi amabili.
England defeat Proteas in T20 match to ...